Kuwa u duulaya diyaaradaha Rikooo oo ay ka maqan yihiin muuqaalada ama textures
Su'aal Kuwa u duulaya diyaaradaha Rikooo oo ay ka maqan yihiin muuqaalada ama textures
maalin 1 sano ka hor 1 #995 by DRCW
Waxaan xusay dad badan oo arrimahan la xariirta boggaan, kuwaas oo ka maqan tiknoolajiyada diyaaradaha, ama foornada madow ee faylasha sawirrada muuqaalka ah. Ugu horeyn ii fasixi wax yar oo ku saabsan FSX. Microsoft waxay soo baxday saddex qaybood oo ka mid ah iskudhafka. Heerka FSX, FSX Deluxe, iyo Ugu dambeyntii FSX Gold Edition. Haddii aad leedahay Laanta FSX ama Deluxe Editions oo aadan u cusbooneysiin, waxaad dhib ku qabi doontaa diyaaradaha qaarkood iyo goobaha dabiiciga ah. Microsoft waxay soo saartay adeega 2 adeegga (SP1 & SP2) iyada oo aan cusbooneysiintaan lagu rakibay, waxaa jiri doona dhibaatooyin. Rikooo Auto Loader wuxuu si fiican u shaqeeya. Waxaan ku siinayaa qalabka hoosta looga baahan yahay ee hoose, si lagaaga caawiyo inaad xalliso arrimahaas. Waxaan rajeynayaa in ay caawin doonto
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: tuncayboran40